Loolanka dheer ee wax barashadeed ee ay soo martay Belyse Ndayikunda - Amjambo Africa
Loolanka dheer ee wax barashadeed ee ay soo martay Belyse Ndayikunda
Caruurmimadeedii Belyse Ndayikunda waxay aamintay inay waligeed lanoolaan doonto reerkooda. Belyse Ndayikunda waxay ku qasbanaatay inay kasoo cararto wadankeedii Burundi kadib markii ay bilaabatay in la bartilmaameedsado dhalinyarada. Waalidkeed ayaa go’aansaday inay u diraan iyada iyo walaalkeed meel ka nabad galyo wanaagsan, sidaas ayayna kutimi wadanka Maraykanka. Markii ay soo gaartay magaalada Portland ee gobolka Maine waxay ku noolaatey meel loogu tala galay dadka guryo la’aanta ah. Waxaa lasiiyay furaash yar oo ay ku seexato. Waxay ku nooleeyd xaalad murugu ah waxayna ahayd mid unugul in dhibaato ay lakulanto. Sanadku wuxuu ahaa 2012 kii waana markii ugu horeysay oo ay dareento inay kasoo fogaatay waalidkeed, saaxiibadeed, iyo bulshadii ay kusoo dhex noolaatay.
Ndayikunda waxay ahayd 18 jir markii ay gashay Meesha ay kunool yihiin dadka guryo la aanta ah. Waxay isbarteen nin dadkii Meesha kujiray ah kaasoo uga sheekeeyay khaldaadka uu sameeyay kuwaasoo ku sababday inuu khasaaro wax walba, shaqadiisii, reerkiisii, saaxiibadiis. Wuxuu usheegay inuu noqday daroogeyste. Ndayikunda ayaa sheegtay wixii ay aragtay maalmihii u horeeyay inay ahaayeen wax aanay waligeed xitaa filin maraykan ah aanay ka arag. Waxay halkaa ku jirtay mudo afar casho ah. Mudadaas oo ay sheegtay inay u ahayd waayo aragnimo iyo diginin inay samayso go’aano uwanaagsan nolosheeda. Hadii kalana ay kudambeeyn meel xun. Afar bari kabacdi waxaa cawiyay hay’ada loo yaqaano General Assistance (GA) taasoo usoo heshay meel ay dagto guriga loo yaqaano Bayside Villages. Meeshaasoo ay dagan yihiin arday badan. Waxaa lasiiyay lacag ay kugadato cunto iyo macluumaad kale oo usahlaya inay gaarto wixii ay rabto.
Waxay heshay reerkooda qof saaxiib la’ ah kaasoo kunool magaaladan Portland. Wuxuuna ka caawiyay inay isqorto iskoolka saree e la yiraahdo Deering High School. Waxyaabihii markiiba kayaabiyay ee kusaabsan qaabka uu ushaqeeyo nimaad dugsiyeedka maraykanka waxaa ka mid ah: wadankeedii Burundi, macalinka waa qof aad looga baqo laakiin halkan macalinku waa mid si fudud ula dhaqma ardayda. Iskoolka Deerin, fasal walba waxaa fariista 10 ilaa iyo 15 oo arday, Meesha Burundi halkii fasal ay fariisan jireen 40 arday. Ardaydu way bad badashaan fasalada oo marba waxay tagaan fasal kaduwan kii hore, laakiin Burundi ardaydu waxay joogaan hal fasal, macalinka kaliya ayaa isubad bdala fasalada. Waxay kaloo ogaatay in ay jiraan waxyaalo badan oo taageeraya ardayda waxayna sheegtay in wax walba yihiin wax aad u wanaagsan.
Biloowgii iskuulku wuu ku adkaaday maxaa yeelay kuhadalka luuqada ingiriisiga ayaa ku adkaa, laakiin waxay marwalba is xasuusin jirtay inay ubaahan tahay inay dadaasho oo sifiican wax udhigato. Tartiib tartiib ayuu isu badalay fahankeedii waxayna noqotay mid horumar samaysa. Waxay sheegtay inaaney ogayn in dadka magan-galyo doonayaasha ah aanay fursad u lahayn inay helaan caawimaada dhaqaale oo lagu dhigto jaamacada. Inkastoo isqorideedii jaamacada la aqbalay hadana may sii wadi karayn waayo maanay bixin karayn dhaqaalaha loo baahan yahay, taasoo niyad jabisay. Lataliyayaasheedii may garanayn si ay u caawiyaan. Qof ayaa usheegay in machadka loo yaqaano Southern Maine Community College (SMCC) uu leeyahay barnaamij lagu magacaabo Path to Graduation for college ready students, kaasoo caawiya ardayda diyaarka u ah jaamacada, siiyana $500 deeq waxbarasho. Mudadii ay dhiganaysay jaamacada ayaa waxay lakulantay Kristi Kaeppel, oo ah lataliye ah. Waxay sheegtay inay aad uga caawisay inay hesho meelo kale oo kacaawiya siiwadashadeeda jaamacada. Ms. Kapper ayaa ka qalin jabisay jaamada oo aaday waxbarashada sare, laakiin waxay ka tagtay wacyi galin ay kureebtay machadka SMCC. Waxayna tustay caqabadaha khaaska ah ee soo waajaha dadka magan-galyo raadiska ah. Machadka SMCC ayaa qaatay wacyigalintaas kadibna bilaabay sanduuq loogu talagalay in lagu caawiyo dadkaas.
Belyse Ndayikunda waxay ka qalin jabisay machadka SMCC oo ay ku dhamaysay labo sano. Waxay sheegtay inay caawimaad ka heshay Margaret ( Maggie) Loeffholz. Kadib waxay u wareegtay oo waxbarashadeedii kasii wadatay jaamada University of Southern Maine (USM), waxayna heshay deeq waxbarashadeed oo dhan $2500 oo loo yaqaano Merit. Taasna waxay ku kasbatay darajadeeda waxbarasho oo saraysay. Intii ay ku jirtay jaamacada waxay kaloo heshay deeqo waxbarasho oo kala duwan oo ay ka heshay dad tabarucayaal ah oo iskugu jira kuwo ay garanayso iyo kuwa kaleba. Mudo sadex sano ah ayay isku wadday inay waxna barato shaqaysana. Ugu dambeyntiina way qalinjabisay sanadku markuu ahaa 2018. Waxay shahaado ku qaadatay maadada xisaabta iyo tirakoobka. Ndayikunda waxay hada kashaqaysaa shirkada la dhoho UNUM. Waxay rajaynaysaa in ay sii wadato waxbarashadeeda oo qaadato shahaadada Masterka. Waxay codsatay barnaamij uu bixiyo shirkadeedu kaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo shaqaalaha lacagta badan ku bixiyay waxbarashadoodii.
Waxay sheegtay in isku dhaxwadka shaqada iyo wax barashada ay ahayd mid aad u adag. Laaakiin uu caawiyay iimaankeeda, dad fiican oo ay lakulantay, iyo go’aanka ay qaadatay kuwaas oo gaarsiiyay inay guulaysato. Waxay kula talinaysaa dadka kale gaar ahaan magan-galyo doonka dadka ah inay waligood isdhiibin. Inay sijoogto ah u dadaalaan si ay u gaaraan himiladooda. Inay xiriirwanaagsan la sameeyaan dadka kale, iyo inay garaacaan albaab walna oo ay kaheli karaan caawimaad. Waxaas oo dhan ayaa ku gaarsiin kara inaad hesho waxbarasho. Waxay sheegtay in dadka Maraykanka ah ay yihiin dad deeqsi ah oo qalbi wanaagsan. Hadii aad lawadaagto sheekadaada kuwo badan oo kamid ah ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan. Waxay xasuusataa maalin ay ka qayb gashay xaflad, kadib markii ay kasheekaysay wixii ay soo martay, qof ayaa usoo dhawaaday kadibna siiyay $2000 oo doolar si ay usiiwadato waxbarashadeeda.
Ndayikunda ayaa sheegtay inay murugo dareento marka ay maqasho dhalinyaro joojisay oo iskaga tagtay waxbarashada. Qaarkamid ah kuwaa joojiyay waxbarashada waxay xaq u leeyihiin deeqaha waxbarasho. Waa fursad aanay haysan dadka magan-galyo doonka ah. Waxayna umalaynaysaa in ay iska luminayaan fursad aad u wanaagsan hadaanay doonin inay helaan shahaado jaamacadeed. Waxay ku faraxsan tahay in dad badan iyo ururo badan ay hada ogyihiin culayska saaran dadka magan-galyo doonka ah ee kasaaran xaga deeqda dhaqaaleed. Waxayna hada ogaatay in barnaamijyo gaas ah lasameeyay. Waxay tiri maalintii aan ka qalin jabiyay jaamacada USM waxay ahay maalintii ugu wanaagsanayd noloshayda. Waxay tiri waxaan fahmay hadii aan jaamacad dhameeyay aniga oo dhibkaas oo dhan soomaray, inaan samayn karo wax walba oo aan doonayo inaan gaaro. Waxay tiri qofkii dadaala wuu helayaa miraheeda.
NextLaga soo bilaabo magaalada ladhoho Kennebunkport ilaa iyo Fort Kent, dadka udhashay Maine waxay soo dhaweynayaan qoysaska magangalyo-doonka ah